American Nih Miphun Cihmih A Timtu Kawlram Cu Hi Nak Fak In Kan Hrem Rih Lai Tiah A Chim - Chin Eleven News
American Nih Miphun Cihmih A Timtu Kawlram Cu Hi Nak Fak In Kan Hrem Rih Lai Tiah A Chim
July 13, 2021 Lianchin Thang World 0
American nihcun Myanmar ram cu miphun cihmih dingin, hma latu ram vialte lak ah tihnung bik ram ah an chiah cang. Cu caah vuleicung ram cihmih ding kong metting ah American nih cun kawlram cu hrem thluahmah dingin hma laknak an tuah.
American ram pehtlaihnak zung lei nihcun Nihin July 13 an ca chuah mi ah- China cozah nih Sika Muslim pawl tamtuk an thahnak hna kongah le Irishteria / Ethopia ram/ Tlalam Suden ram, le Myanmar ram miphunabubu inathattu caah fak khawh chung in American nawlneitu Blinken nih cun hremnak kan pek hna lai tiahachim.
မြန်မာတွင် လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု အန္တရာယ်အများဆုံးနိုင်ငံများတွင် ပါဝင်၍ အမေရိကန်က ထပ်မံ အရေးယူမည်၊ ကုလလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက မြန်မာတွင် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်သူများ အပြစ်ပေး အရေးယူရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၊ ဇူလိုင် ၁၃ ; မြန်မာနိုင်ငံသည် လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု ဖြစ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်အများဆုံးနိုင်ငံများတွင် ပါဝင်နေကြောင်း ယမန်နေ့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနက နိုင်ငံတကာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုနှင့် ရက်စက်မှု တားဆီးရေး အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြလိုက်ပြီး အရေးယူမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု အမေရိကန်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ပြောဆိုသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာတွင် တရုတ်အစိုးရက ဝီဂါမွတ်စလင် အနောက်မြောက်ဖက်ပိုင်း ရှင်ကျန်းဒေသကလူနည်းစုတွေကို လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်သည်ဆိုသော စွပ်စွဲချက်နှင့် အီရီထရီးယား၊ အီသီယိုးပီးရား၊ တောင်ဆူဒန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့တွင်လည်း လူမျိုးစုလိုက်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားမှုများ ရှိနေသဖြင့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ ထပ်မံချမှတ်သွားဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ဓာတ်ပုံ- အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက နိုင်ငံတကာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုနှင့်ရက်စက်မှုတားဆီးရေး အစီရင်ခံစာကို ရှင်းလင်းနေစဉ်။
Hi Hna Pathum Ruangah England Ram Cu A Buai Taktak!
Nichiar Tiawk In Ralhrang Le KNU Karlak Ah Kahnak A Chauk Cang